Umfundi owenza unyaka wesine kwezobudokotela noMengameli we-SAMSA e-UKZN, uNks Tivana Chellan.
Abafundi abenza izifundo zobudokotela abangamalungu e-South African Medical Students Association (i-SAMSA) beziko lase-UKZN baqale umkhankaso wokunqanda i-COVID-19 ngenkathi kuqala isikhathi sokuvalwa thaqa kukazwelonke.
Kulo mkhankaso kunochungechunge lwezethulo ngezihloko ezehlukene ezihambisana ne-COVID-19. Kuze kube manje izihloko esezethuliwe bezigxile ekusabalaliseni imininingwane eshaya khona; imininingwane eyiyo ngegciwane, ukuqonda indlela yokusebenzisa izifonyo namagilavu; isimo sempilo nesenhlalonhle nenselelo yesibopho i- “I-Care”.
UMengameli we-SAMSA yase-UKZN, uNks Tivana Chellan, uthe: ‘I-COVID-19 Student Action Team yethu isebenze ngokuzikhandla ifundisa abantu, nokukhuthaza isimo esikahle sezempilo nokuthobela imiyalelo yomgonqo. Ngincoma ukuzinikela kakhulu kwalo lifundisa futhi lihlomisa ngamaqhinga abantu emkhankasweni wokulwa nalolu bhubhane.'
Ngikhuthaze bonke omengameli bawo wonke amaziko e-SAMSA ezweni lonke ukuthi babambisane nathi emikhankasweni yethu nokuthi babambisane ezinhlanganweni zabo nasezingeni likazwelonke ukuze siqinisekise ukuthi bonke abantu baseNingizimu Afrika bayakwazi ukuthola imininingwane.’
Isigaba sokuqala somkhankaso sincike ekuchitheni izinkoleloze ngegciwane ngokwenza izinkulumo zezigcawu zokuxhumana ezinemininingwane elula neyiqiniso ethinta ngokuphelele ukuqondakala, ukusabalala nokugwemeka kwe-COVID-19. Kufakwe nesigaba sokuqinisa ukusebenza kwamasosha omzimba ngezindlela ezilula, ezongayo.
Isigaba sesibili sithathwe njengodaba olujulile noluphuthumayo obeludinga ukuxazululwa kanti belugxile embuzweni othi “ngubani okudingeka afake isifonyo?”. Abafundi babalule amaphutha avamile abantu abajwayele ukuwenza uma befaka isifonyo abenza babe sengozini yokutheleleka yigciwane njengokuthinta isifonyo ngaphambili ngenkathi besisebenzisa, indlela engalungile yokukhumula izifonyo, nokubeka isifonyo esilevini. Babuye bakhuluma ngokubhebhezela ukungcola ngendlela okusetshenziswa amagilavu ngayo.
Isigaba sesithathu sigcizelele ubumqoka bokulandela indlela eyodwa nsuku zonke nohlelo lomgonqo. ‘Izindlela zesimo somqondo nenhlalonhle kufanele zisetshenziswe mihla yonke ukuze sihlale siphila, sinomdlandla wokunqoba lolu bhubhane,’ kusho uChellan.
Isigaba sesine bekungesokwenza amabheji esibopho i-I CARE ukukhuthaza ukuthi abantu baseNingizimu Afrika nokuthi bazibophezele ekuthobeleni imiyalelo nge-COVID-19, ukuzwelana nabadinga usizo nokweseka abasebenzi bezempilo nabenza imisebenzi ebucayi nokuqeda ukusatshalaliswa kolwazi okungesilona ngalesi sikhathi esibucayi.
‘Sikholwa wukuthi umsebenzi wobuqhawe nezenzo ezincomekayo zokuzidela, ukuzinikela, ubuntu nobuholi zidinga ukunconywa. Ngakho ibheji ngalinye belinesitatimende esibalula iqhaza elimqoka ongaba nalo ekulweni ne-COVID-19. Sinxuse wonke umuntu afake ibheji elimthintayo njengesithombe sakhe noma asifake ezinkundleni zokuxhumana ukuze sizoqhubeka ngalolu nyawo ngalesi sikhathi esibalulekile somgonqo. Sinxusa bonke abantu baseNingizim Afrika ukuthi basisize sikhuthaze abantu abaningi ukuthi babambisane, benze isibopho esithi “I CARE” ukuze kube neNingizimu Afrika eyodwa, ebumbene,’ kusho uChellan.
Amabheji anobuciko abenziwe nguNks Kiara Govender (owenza unyaka wesine) noNks Serini Reddy (owenza unyaka wesithathu). Ithimba le-COVID-19 Student Response libunjwe yizitshudeni zobudokotela kusukela kwezenza unyaka wokuqala kuye kulezo ezenza unyaka wokugcina.
USolwazi Mosa Moshabela ophethe i-COVID-19 War Room yase-UKZN uncome izitshudeni ngalo mkhankaso wazo oncomekayo. ‘Halala ngomkhankaso wenu wokusabalalisa ulwazi okuyilona ngaleli gciwane emiphakathini yakithi. Ngalezi zikhathi zobunzima kubalulekile ukuthi sibambisane njengabasebenzi bezempilo ukuqinisekisa ukuthi izinkoleloze ziyaphikiswa njengoba zisabisa abantu. Njengabafundi beziqu zobudokotela, nisendaweni emqoka yokuguqula imiphakathi yakini ngalo mkhankaso wokusabalalisa ngolwazi omkhulu. Ningawuyeki lo msebenzi omuhle.’